The Ab Presents Nepal » मुक्तीनाथको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर आजको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।जय मुक्तीनाथ माई।
मुक्तीनाथको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर आजको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।जय मुक्तीनाथ माई।
जंगबहादुर राणा पछिको सहासिक पहिलो प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुनेले सेयर गरौ
कुलमान घिसिङले गर्दा लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्नेहरू पाखे हुन् -सूर्य थापा (भिडियाेसहित)
समय साक्षप निर्माण भएकाे शर्ट मुभि शून्य सार्वजनिक भिडियो सहित
चिनले सीमा अतिक्रमण गरेकोमा सरकारले केहि नगरे पछि चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन
बूढानिलकण्ठले सबैको कल्याण गरुँन असोज ७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस् र ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस दिन शुभ हुने छ !
कसले रोक्यो कुलमानको नियुक्ति र आखिर किन ? भिडियो सहित
गणेश भगवानको दर्शन गर्दै आज असोज ६ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस् र ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस दिन शुभ हुने छ